China Posture corrective ပခုံး lumbar အောက်ပိုင်းနောက်ကျောသတ္တုတွင်းစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း | ကွမ်းခြံကုန်း
ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းများ -စားပွဲတင်တင်းနစ်ဘောလုံး၊ ကြက်တောင်၊ တင်းနစ်ဘောလုံး၊ ဘောလုံး၊ ဘတ်စကက်ဘော
ပစ္စည်းPolyester, Polyester, Elastic ကြိုးများ
အရွယ်အစား:SML XL XXL, ပြန် Brace
လိင်:Universal, ကိုယ်ဟန်အနေအထား Corrector
ဝန်ဆောင်မှု:OEM / ODM, Back ကိုပံ့ပိုးမှု
နမူနာ:Back Pain Relief ရရှိနိုင်
လုပ်ဆောင်ချက် -သံလိုက်နှင့်အရိုးအထူးကု function ကို
အားသာချက် -မြင့်မားသော elastic၊ တင်းကျပ်စွာညှိနိုင်ပြီးဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်
အသွင်အပြင်:သက်သောင့်သက်သာ, Adjustments နှင့်ထိရောက်သော
ထုတ်ကုန်အမည်:ကိုယ်ဟန်အနေအထားမှန်ကန်သောပခုံး Lumbar အောက်ပိုင်း Brac
ထုပ်ပိုးခြင်း -1 အပိုင်းအစ / ပလပ်စတစ်အိတ်
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား:တစ်လလျှင် ၁၀၀၀၀၀ Piece / Pieces
Supply နိုင်ခြင်း:တစ်လလျှင် ၁၀၀၀၀၀ Piece / Pieces
၏လုပ်ဆောင်ချက် ကိုယ်ဟန်အနေအထားပြင်ဆင်ရေး / နောက်ကျောနာကျင်မှုခါးပတ် ၁။ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေပြီးကိုယ်ဟန်အနေအထားမမှန်ခြင်းများကိုပြုပြင်ပေးသည်။ ကျောပိုးအိတ်ကိုချိန်ညှိနေစဉ်တွင်၎င်းသည်ပခုံးများကိုညင်ညင်သာသာပြန်ဆွဲထုတ်နိုင်သည့်အရံတပ်ဆင်ထားစဉ်လည်ပင်းနှင့် ဦး ခေါင်းကိုဖြောင့်ထားသည်။ 2. ကုထုံး၊ ကုသမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်နောက်ဖျားသို့ပြန်သွားသည် မှန်ကန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားအတွက်ညင်ညင်သာသာပြန်ဆွဲထုတ်ရန်ရှေ့ပခုံးများပတ်ပတ်လည်တွင်ကြိုးကိုသုတ်ပါ။ သငျသညျအရပ်ရှည်ရှည်နှင့်ဖြောင့်မတ်လုပ်ပါ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရဟန့်အတား၊ 5.helps အဟောင်းတွေကျောရိုးအဖြစ်များတတ်သည် ၆။ သင်ပိုမိုရှည်လျားပြီးမတ်တတ်ရပ်နိုင်အောင်ကူညီပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရိုးအထူးကုထုတ်ကုန်များတွင်ကျွမ်းကျင်သည် ဒူးထောက် ပံ့ပိုးမှု, ခါးနောက်ကျောသတ္တုတွင်းပံ့ပိုးမှု, ကိုယ်ဟန်အနေအထား Corrector, Wrist Brace Support, တံတောင်ဆစ်သတ္တုတွင်း ပံ့ပိုးမှုစင်တာ ခြေကျင်းသတ္တုအထိမ်းအချုပ် ပံ့ပိုးမှုစင်တာ Shoulder Brace ပံ့ပိုးမှုစင်တာ လည်ပင်းသတ္တုတွင်းအထောက်အပံ့နောက် ... ပြီးတော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်္ဂါရပ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာအကောက်ခွန်ဌာနမှဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းတံဆိပ်နှင့်အရောင်သေတ္တာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်!
အသေးစိတ်: ထုတ်ကုန်: ကိုယ်ဟန်အနေအထားမှန်ကန်သောပခုံး lumbar နိမ့်ကျောသတ္တုအထိမ်းအချုပ် ပစ္စည်းများ: elstic ကြိုး, spandex, ချိတ်နှင့်ကွင်းဆက်, polyester လုပ်ဆောင်ချက် - မှန်ကန်တယ် နောက်ကျောကိုယ်ဟန်, ပခုံးပြန်သတ္တုအထည်ကိုဆက်ကပ် အရောင် - အနက်ရောင် အရွယ်အစား: SML XL XXL ရင်ဘတ်: 65-75 (စင်တီမီတာ) 76-80 (စင်တီမီတာ) 81-85 (စင်တီမီတာ) 86-95 (စင်တီမီတာ) 96-105 (စင်တီမီတာ) စက်ရုံ - G.20 ၏ NO.202 ရှိစတုတ္ထအထပ်တွင်အရှေ့ဘက်နှင့်အနောက်တောင်ဘက်အခြမ်းရှိသည် လိပ်စာ - စက်မှုဇုန်၊ Hengshan လမ်းအမှတ် ၃၈၉၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်၊ လိုဂို - ငါတို့ပိုင်လား အာမခံ: 12 လ ကုန်သွယ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များ ငွေပေးချေမှု နမူနာအမှာစာသို့မဟုတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအမိန့် - ၁၀၀% TT ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း ပမာဏအမြောက်အများကိုကြိုတင်ငွေ ၃၀% ဖြင့်ကြိုတင်ငွေပေးချေပြီး၊ လက်ကျန်ငွေကိုမပေးပို့မီပေးချေရမည်။ ပို့ဆောင်မှု: 48 နာရီအတွင်း order- နမူနာ အမြောက်အများမှာယူပါကအရေအတွက်အရ (ပမာဏ ၂၀၀၀ ထက်မပိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပေးပို့ချိန်သည် ၇ ရက်ခန့်ဖြစ်မည်)
စံပြရှာဖွေနေသည် Lumbar နောက်ကျော Braceထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း? သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အားလုံးအောက်ပိုင်း Brace သည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်မူလအစကိုယ်ဟန်အနေအထားမှန်ကန်သောပခုံးသုတ်ဆေးဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ: ကိုယ်ဟန်အနေအထား Corrector
နောက်တစ်ခု: ပူ Adjustable Inflatable သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာလည်ပင်းဆွဲဆောင်ကိရိယာ
ကြာရှည်ခံ Adjustable သက်တောင့်သက်သာ Back Brace Postu ...
ကလေးများ Humpback ကိုယ်ဟန်အနေအထား Corrector
Clavicle ကိုယ်ဟန်အနေအထားပြင်ဆင်သူကိုပြန်ထောက်ခံမှုညှိနှိုင်း ...